Fanolorana ny Fandaharan’asa Politika Ankapoben’ny Fanjakana – Sénat de Madagascar
Fanolorana ny Fandaharan’asa Politika Ankapoben’ny Fanjakana
Notanterahina tetsy anivon’ny Antenimierandoholona ny Talata 05 febroary 2019 ny fanoloranan’ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta, Christian NTSAY, ny Fandaharan’asa Politika Ankapoben’ny Fanjakana araka ny voalaza ao amin’ny andininy faha 99 ny Lalàm-panorenana.
Manamafy izany ny andininy faha 55 andalana faha 6 milaza fa ny Filohan’ny Repoblika no mamaritra, eo anivon’ny Filankevitry ny Minisitra, ny Politika ankapoben’ny Fanjakana, ka ny governemanta no mamadika izany ho Fandaharan’asa araka ny voalazan’ny andininy faha 63 andalany 1 ny Lalàm-panorenana.
Mifandrindra amin’ny Velirano miisa 13 nifanaovan’ny Filoham-pirenena tamin’ny vahoaka Malagasy ity Fandaharan’asa ny Politika Ankapoben’ny Fanjakana ity.
Lohahevitra 5 lehibe no misongadina dia :
Ny lafiny Fandriham-pahalemana sy Filaminana
Mitodika tanteraka amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara sy ho tombotsoan’ny vahoaka Malagasy ny Fandaharan’asa, hisy rafitra mpanara-maso hajoro eo anivon’ny Fiadidian’ny Repoblika sy Primatiora.
Amin’ny maha mpisolo tena ny Vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana ny Loholon’i Madagasikara no nitondran’izy ireo ny hetahetan’ny vahoaka any amin’ny faritra iandraiketany tsirairay avy nandritra ny fihaonana. Vonona mandrakariva amin’ny fiaraha-miasa amin’ny governemanta sy ny fanjakana ny Loholona ka ny tanjona iraisana dia ny fampandrosoana ny firenena Malagasy ho amin’ny tombotsoan’ ny vahoaka ao aminy hoy ny fanamarihana nataon’izy ireo.
Nitarika ny fotoana ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO.